Imbali yemizobo yaseCuba | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Masibone ukuba yintoni i- Imizobo yaseCuba ukusukela kwisiqingatha sesibini senkulungwane yamashumi amabini ukuza kuthi ga namhlanje kwaye kungaleyo yama-50s Intengiso yavela eCuba, ngaxeshanye kwavela impembelelo kwihlabathi liphela emva kwexesha lemfazwe.
Amandla eNkosi Umzi mveliso waseMelika waseMelika Ngokudibeneyo nokomelela okwenzekileyo phakathi kwamazwe omabini, kwavumela intengiso ukuba ibe yinto ebalulekileyo ye usasaze iipateni ezahlukeneyo zangoku, iimveliso, isimbo kunye nentuthuzelo eyayinayo inkcubeko yaseMelika.
1 Intengiso yonyusa ngo-1948-1958
2 Imibutho kunye nezikolo ezinikezelwe kwintengiso
3 Imimoya emitsha eCuba
Intengiso yonyusa ngo-1948-1958
Olu bhengezo lwentengiso lwalunombulelo kwiimveliso ezinje iziselo ezinxilisayo, ikofu, icuba kunye namanqaku avela eCuba, athe nawo anegalelo kulo msebenzi wokwazisa.
Imibutho kunye nezikolo ezinikezelwe kwintengiso
ECuba, iinkampani ezininzi zentengiso zenziwa ngale minyaka, ezinye zazo zazizii- Intengiso yeTropiki Co okanye iHavana yeNtengiso yeC. Kwangokunjalo, uMbutho wabathengisi baseCuba, owasekwa ngo-1935, walikhuthaza eli candelo kwaye waqala umsebenzi wentengiso kwesi siqithi, eyathi kamva yaqiniswa kukusekwa kweNational Association of Advertising Professionals kunye noMbutho weeNtengiso zeArhente.
Nangona esinye seziganeko ezibaluleke kakhulu yayikukudalwa kwe Isikolo sobungcali seNtengiso ngonyaka 1954.
Ngo-1959-1964: Ukuvuka okuguqukayo
Uhlaziyo ibangele utshintsho oluninzi, ukongeza kwimveliso epheleleyo, ezoqoqosho, ezopolitiko kunye nenkcubeko.
Intengiso yabonwa njenge into eyingozi eyenziwe ngongxowankulu uqobo kwaye kukuba ngonyaka we-1960, iSikolo seNtengiso sanyamalala kwaye ngoFebruwari 22, 1961 kwenziwa uvavanyo lokugqibela, olwaluqulathe usuku lonke ngaphandle kwezaziso zorhwebo nakwiTV okanye unomathotholo. Emva kovavanyo, naluphi na uhlobo lwentengiso kumabonwakude, kunomathotholo nakumajelo eendaba lwapheliswa ngokupheleleyo. Ngale ndlela enye Uninzi lwamashishini anamandla eCuba. Nangona kunjalo, ipowusta ikwazile ukuba yinto ebalasele kwimisebenzi eyahlukeneyo njengomthumeli kunye nendlela yokuqhelanisa neziganeko eziphambili ezithi zenziwe ngamaxesha ahlukeneyo.
Ngexesha lika-1959, Kwenziwa amaziko enkcubeko ama-2, ethi kamva ibe nefuthe kwimisebenzi yoyilo, ubukhulu becala ekudalweni kweepowusta kunye nezinye izinto zonxibelelwano ezinxulumene noko kwaye la maziko ebeyi ICasa de la Américas kunye neZiko laseCuba lobuGcisa kunye neMveliso yeFilimu eyaziwa ngokuba ICAIC. Emva kwexesha i-CNC okanye iBhunga leSizwe leNkcubeko lenziwe, eyona njongo yayo iphambili yayikukusasaza inkcubeko.
1965-1975: uyilo luyasuswa
Ixesha lokuncoma okukhulu kuyilo lwegraphic; Nangona amaphephandaba anciphile, iimagazini zanda, ukongeza, ingqokelela yeencwadi entsha yaphuhliswa yandiswa Ukwenza iipowusta ngamaqumrhu orhulumente awayephethe iinkqubo zopolitiko kunye nezefilimu kunye nemicimbi eyahlukeneyo yenkcubeko.
I-1976-1989: ukuma kunye nokubuyela umva
Ngelo xesha utshintsho oluninzi lwezolawulo luqale kunye nabapolitiki abachaphazele uyilo.
Ngendlela efanayo, ukuvalelwa kubangele ukugcwala kweekhowudi ezibonakalayo kunye nezitayile ezisetyenziswe ngabaqulunqi kude kube lelo xesha. Ngelixa itekhnoloji yenqanaba lehlabathi isomeleza kwaye idala iikhowudi ezibonakalayo kuyilo nakwintengiso, eCuba iqala ukumiliselwa ngendlela eneentloni kwaye ithintelwe. Itekhnoloji yeekhompyuter ngexesha le-80's.
Ngo-1990-2000: isaphulelo semizobo yaseCuba
Abaqulunqi abaninzi baseCuba bazimela kwaye baqala ukonyusa iiarhente zentengiso ezincinci.
IKomiti yeNkqubo yaseCuba yadalwa ngo-1992, eyayinombutho ongekho phantsi kukarhulumente owenziwa liqela elibalulekileyo labayili, kwaye eyona njongo yayo iphambili yayikukusasaza uyilo.
Imimoya emitsha eCuba
Iprojekthi yeGeo-Graficas iyaqala, esisiphakamiso esivumela ukuba saziwe ngaphandle kweCuba, uyilo kunye nabayili yangoku yesiqithi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Imizobo yaseCuba